E E ဘယ်သူပေါက်… မတ်လ ၁၀ရက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Opinions & Discussion » E E ဘယ်သူပေါက်… မတ်လ ၁၀ရက်	12
E E ဘယ်သူပေါက်… မတ်လ ၁၀ရက်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 7, 2016 in Opinions & Discussion | 12 comments
မြန်တြံ့သမဒသစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းမည့် မတ်လ ၁၀ရက်နေ့ နီးcatလာပီဂျ။ သတင်းအမျိုးစုံ ထွက်ပေမှည့် ပုပ်ကိုယ်နှစ်ဦး နှစ်ယောက်ပေါ် တည်မှီတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံစံဆိုတော့လည်း ခန့်မှန်းရခက်တယ်။ သမဒဘယ်သူ ဖြစ်မည်လဲ အသာထား၊ ၅၉/စ နဲ့ငြိမှာလား ကျော်မှာလားတောင် အသိခက်တယ်။ အသေအချာ တွက်ထားတွက်ထား နောက်ဆုံးမိနစ် ပြောင်းလဲဆုံးဖျက်ချက် အဖြေဖြစ်လာနိုင်လို့ပဲ။ တိုးတက်တဲ့စနစ်၊ နိုင်ငံတွေမှာတော့ တင်ကြို နှပ်ကြောင်းပေးတယ်။ ဘိုလိုတော့ခ်ရင်ဒေါ့ Risk management ပေါ့ဂျာ.. Uncertainty ခေါ်တဲ့ မသေချာမရေရာမှုကြောင့် ရလာမည့် ဆိုးကျိုးဖြစ်တန်ကိန်းကို လျော့ပါးသက်သာအောင် စီမံထားတာပဲ။ ထားပါတော့ ထားပါဒေါ့.. ဟိုက သခင်ဂျီးတွေတိုင်းပြည်.. ဒီက ရွာငယ်ဇနပုဒ် မြန်တြံ့ပြည်ဂလေး..။
လာဘ်တလော သိနေတဲ့ သတင်းအရဆို (သိပ်များများတော့ မဟုတ်.. အွန်လိုင်းမှာ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ တွေ့လိုက်၊ ဦးညဏ်ဝင်းနဲ့ တွေ့လိုက်၊ ဦးထင်ကျော်နဲ့တွေ့လိုက်.. ဘွားဒေါ်နဲ့တော့ မချက်ဖြစ်တော့ဘူး.. သူလဲ အလုပ်သိပ်များသကိုး) သမတနဲ့ ဒုသမတကို ဒေါ်စုနဲ့ အခြားအမျိုးသားတဦး အမည်တင်သွင်းလိမ့်မည်။ စစ်တပ်က ၅၉၊စ အကြောင်းပြ ကန့်ကွက်လျင်တော့ ဒုတိယအချီ ပြန်ရွေးရမည်။ စစ်တပ်မှ သမတနေလျှာ ဘွားဒေါ်ကို လာဘ်ခံမလား၊ သတင်းတွေ အရတော့ မဖြစ်နိုင် သို့သော်ပုံစံကြည့်ရတာ သူတို့လည်း ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ထားပုံ မရသေး။ လာဘ်တွေ့မှာ ဒေါ်စု သမတဖြစ်တာ သူတို့အဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်။ နို့မို့ဆို သမတအထက်မှ နေလျှာယူ လှုပ်ရှားမည့် ဘွားဒေါ်ကြောင့် ဒင်းတို့ လူဘုံအလယ် မျက်နှာမထားဝံ့ ဖြစ်မည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရင့်၊ တွေ့ဆုံမှုများမှတဆင့် နာဂစ်အခြေခံအုပဒေ၏ တရားမဝင်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြခံရမည်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဒေါ်စုကို ဘုရင်မသဖွယ် ခရီးဦးကြိုဆိုပြု ဧည့်ခံလျင် သောက်ရှက်ပိုကွဲမည်။ ခံစစ်နေလျှာ ယူရမည့် စစ်တပ်အဖို့ တဖက်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဝေဖန်သမှု ပြုခြင်းထက် ကိုယ့်တာကိုယ် လုံအောင်လုပ်ရမည့် အချိန်ရောက်ပြီ မဟုတ်လော။။ (ငါကွ….)
ဒီချုပ်အနေနှင့် စစ်တပ်၏ ကန့်ကွက်မှုကို လာဘ်ခံပါက ပါတီဝါရင့် အခြားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး သမတနှင့် ဒုသမတဖြစ်လာမည်။ ဒီနေလျှာမှာ မရှင်းတာ (အနော်သဟုတုဗ မကြွယ်ဝဒါလှဲ ဖြစ်မည်။) ဒုသမတ ရွေးပုံ..။ နားလည်သလောက် ဒုတိယနှင့် တတိယ မဲရရှိမှုအပေါ် မူတည်ရွေ့ ဒုသမတ ၁ နှင့် ၂ ဖြစ်မည်။ သမတမရွေးခင် ဒုသမတ ၃ယောက်စလုံး ပြိုင်တူရွေးလျင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူ ဒုတိယသမဒ ၂ ဖြစ်သွားမည်။ ဖွတ်အဆိုးဓမြ လက်ထက်မှာ ဒုသမတ စိုင်းမဲခိုး ထက် ဒုသမတဟောင်း ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး မဲပိုရလို့ ဒုသမတ၂ ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ အဲဒီ ဒုသမတ ၂ယောက် တန်းစီပုံ အရေးပါသည်ဆိုလျင် ဒီချုပ်အနေဖြင့် မဲပေးမှုကို အချိန်ခွဲ လုပ်မှရမည်။
ဒေါ်စု သမတဖြစ်ခွင့် မရလျင်… ကာလုံတွင် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ် ၅ဦးနှင့် စစ်ကောင် ၆ကောင် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သမတဒေါ်စု ပါလျင်ပင် တမဲ အလိုလျောက် ရှုံးနေပြီမို့ သိပ်တော့ ဆုံးရှုံးစရာ မရှိ။ ဘွားဒေါ် အနေနှင့် ကာလုံအဖွဲ့ကို ပတ်ရှောင်ကွင်း သွားလို့ရသည့် နည်းလမ်း များစွာရှိသည်။ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် လိုအပ်နေသော မြန်တြံ့ပြည်တွင် ကာလုံ မပါလဲ ဖြစ်သည့် ပရောဂျက်များ ဒုနှင့်ဒေး။ ကာလုံ သဘောမတူ ထင်လျင် မတင်နှင့်၊ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့်လုပ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလို မြစ်ဆုံလို ကိတ်စမျိုးကြတော့လည်း အကြေအလည် ဆွေးနွေး.. သူတို့အကျိုးစီးပွားနှင့် တွဲခေါ်ယူ။ အစိုးရ တခုလုပ်ရမည့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ မြေယာအရှုပ်အရှင်း၊ ပွင့်လင်းမှုမဲ့ စီမံကိန်းများ.. ဒါတွေသည် ဒီချုပ်အစိုးရ လက်ဝယ် ရှိသည်။ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကာလုံခံတပ် ထင်သလို သုံးမရလျင် စစ်ဘိုစုတ်များ ၄င်းတို့ ဗျူ ဟာအမှား မြင်လာမည်။ မမြင်လည်း ကိုယ်က လူထုရွေးထားတဲ့ ဒီမိုကရက်အစိုးရ.. လူထုအားဖြင့် သွားလို့ရသည်လမ်း အများအပြား။ ရပ်တည်ချက်မှန် စေတနာမှန်ဖို့သာလိုသည်။
အဲသလို ဖြစ်လျင် ကာလုံတွင် ဒီချုပ်မှ လွှတ်တော်ဥကဌနှစ်ဦး၊ သမတနှင့်ဒုသမတ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်မည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ဒေါ်စု အနီးကပ်လက်ထောက်ဟောင်း ဒေါက်တာတင်မာအောင် သတင်းထွက်လာသည်မို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၂ယောက်ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်သည်။ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထက် ပိုသည့် တွဲဖက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူး အသစ်ဖြစ်လာမည်လော။ ၈၈ပွင့်လင်း ဦးကိုကိုကြီး နှင့် ဒေါက်တာတင်မာအောင် မြင်မိသည်။
ပုံ – မြန်တြံ့နိုင်ငံရေး ကင်းမိတ်ကာ ကြောင်ကြီး
မြစပဲရိုး says: ဖတ်လို့ကောင်းသားကွယ်။ သို့ပေသည့် အမည်နာမလေး တွေ ကိုတော့ မှန်အောင် လုပ်ပါဦး။
နဂိုကမှ ဟိုပြော ဒီထင် မအောင့်နိုင်တဲ့ ကလေးဆိုး တွေကြား မျက်စိမူး နေရလို့ပါ။ ဦးဝင်းတင် တဲ့ အပေါ်မှာ သုံးထား။ နောက် တော့ ဒေါက်တာ တင်မာဝင်း တဲ့။
(ဦးဝင်းထိန်၊ ဒေါက်တာတင်မာအောင်) လို့ ပြောလိုတာလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးလို့ ကတော့ ” ကြောင်” သမ္မတ ဖြစ်ရင်တောင် ဖြစ်စမ်းပါစေ့။
ရွေ့လိုက်တဲ့ အကွက် တွေ ဘယ်သူမှ ဉာဏ်မမှီ နိုင်တော့။ အားရ လိုက်ပါဘိ။ :-)))
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟုသဲ့ ဟုသဲ့.. ပြင်လိုက်ပါပီ မားမားလော်ဘီမြ.. နောင်ကိုလဲ အမြင်မတော်ဒါရှိ စုန်းမ နိုင်ပါဒယ်။ သာမီးဒေါ်ဂလေးရော မတွေ့ပါလား… ဘာလား ညာလား…
Thint Aye Yeik says: ဒီတောင်ကို အမေကျော်နိုင်မှာပါ
kai says: ဒေါ်စုသမ္မတမဖြစ်ရင်တော့.. တော်တော်ေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ပြောရမှာပဲ..။
အသက်၇၀ကျော်နဲ့.. သူမျက်နှာကြီးပြ… ကမ္ဘာထွက်လှည့်တောင်းရမှာ…။
သမ္မတဖြစ်လို့ကတော့.. ပင်ပန်းလိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်း…။ အသက်တောင်တော်တော်တိုသွားမယ်..။
မြစပဲရိုး says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကာချုပ် က သမိုင်း ကို ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ သူရဲကောင်းကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်သွားမှာပါ။
ကြည့်ရတာ ဒီလို ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့ နာမည်ကျန်ခဲ့ ရမှာ ကို အားနာ နေ လား မသိပါဘူး။
နံရံ ရဲ့ တစ်ခြားတစ်ဖက်ကို ကူးချိန် ချန်ခဲ့ ရမှာက အားလုံးကိုပါဘဲ။
ရာထူး၊ ဥစ္စာ တွေ က သူများစားသွားမှာ၊ နာမည် ကသာ ကိုယ့်အတွက် ကျန်တာ။
နာမည် ကို မမြဲခြင်း တွေ နဲ့ လဲ တော့မှာလားမသိ။ အချိန်မှီပါသေးတယ်။ ပြင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းရုံပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ သမ္မတ အခု မဖြစ်လိုက်ရင် လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်း တရားတွေ ပို ရ သွားမဲ့ အကွက် ကို သူတို့ မမြင်ကြဘူး။ နောက်ပိုင်း သမ္မတ အတွက် ပြင်နိုင်တဲ့ အခွင့် လဲ ရှိနေနိုင်တာမို့ သူများ ကို နာမည်ကောင်း ပေးမဲ့ အစား အခု ကိုယ်က ဦးအောင် ယူပလိုက်စမ်းပါ ကာချုပ်ကြီးရယ်။
အဲလို လုပ်ပေးလို့ ကတော့ မိဘ နဲ့ တန်းတူထား ကန်တော့ ပါ့မယ်။
hmee says: ဥဏးကြောင် စာကို ဖတ်ပြီး နားလညမအောငမ မနည်းကို ဘာသာပြန်ယူရတယ် :P
kotun winlatt says: ကင်းမိတ်လိုက် အဲလေ ကင်းမိတ် အူးကျောင်ကျားး မှားပျံပဟ အူးကျောင်ဂျီးရဲ့ အမျှင် မဟုတ်သေးပါဘူး စူးရှထက်မျက်လဒိ အသွေးအမျင်မြားဂို သလေး သစား ယိုယို တေတေ ဖတ်မပ်တွားပါဂျောင်း
ပုံ / ဘူးတူး ဘားတား မောင်တောသား
ခင်ဇော် says: ကိုယ်တွေကတော့ ဘာမှ ပူမနေတော့ဘူးး
သူတို့ ပူ အလှည့်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: “သမတနဲ့ ဒုသမတကို ဒေါ်စုနဲ့ အခြားအမျိုးသားတဦး အမည်တင်သွင်းလိမ့်မည်။ စစ်တပ်က ၅၉၊စ အကြောင်းပြ ကန့်ကွက်လျင်တော့ ဒုတိယအချီ ပြန်ရွေးရမည်။ ”
Swal Taw Ywet says: မတ်လ ၉ ရက်နေ့ ညအထိ သတင်းတွေမှာ
တမဲမှ အလျော့ မခံနိုင်ဘူး လို့ အမေစုက မှာတဲ့ အကြောင်း
အောင် မြင်ပါစေ NLD။
မြစပဲရိုး says: ကြောင်ကြောင်
နောက်တာပါ။ အနောက်မှာ ကျန်ခဲ့တာ တွေ ကို သင်ခန်းစာ အဖြစ်ချန်ပြီး တို့များ မြန်မာပြည် နဲ့ လူထုကြီး တိုးတက်ရေး အတွက် တတ်နိုင်သ၍ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကြပါစို့လား။ :-)))
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: စရာကျောင်ကျီး ၃သတ်တာ ကြိုက်တယ်
ပလပ်စ် ပလပ်စ် ပလပ်စ်